Al-Shabaab oo QARAX ku dishay Injineer Shiinees ah - Caasimada Online
Home Warar Al-Shabaab oo QARAX ku dishay Injineer Shiinees ah
Al-Shabaab oo QARAX ku dishay Injineer Shiinees ah
Nairobi (Caasimada Online) – Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxyo is xig-xigay oo ka dhacay gobolka xeebta Lamu ee dalka Kenya, kaas oo ay mas’uuliyadiisa sheegatay kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya.
Qaraxyada oo ahaa miino ayaa waxaa lala eegtay kolonyo ay galbinayeen ciidamo ka tirsan kuwa Kenya xilli ay marayeen inta u dhexeysa deegaanada Ijaara iyo Sangaa’ilow.
War kasoo baxay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxa uu haleelay gaari Kooyal ah oo ay la socdeen ciidanka Booliska Kenya, isla-markaana uu ka dhashay khasaare kala duwan.
Al-Shabaab ayaa sidoo kale shaacisay inay qaraxyadaasi mid ka mid ah ay ku dishay nin Injineer ah oo u dhashay dalka Shiinaha, sida ay hadalka u dhigtay.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi kusii daraya in kolonyada la qarxiyey ay socdaalkooda sii wateen, kadib weerarka ay la kulmeen, waxaana xaaladdu ay tahay mid deggan.
Dhanka kale ma jiro illaa iyo hadda wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee Kenya oo ku aadan qaraxyadaasi ee ay guulaha ka sheegteen Al-Shabaab.
Maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa weeraro u badan qaraxyo ay ka dhacayeen deegaanada u dhow xadka Soomaaliya, waxaana ugu dambeeyey qaraxii lagu weeraray xildhibaano ka tirsan Kenya iyo ciidamo la socday oo ku socdaalayey duleedka Garissa.